२० बर्षपछि क्रोएसियाको भाग्य चम्क्यो, डेनमार्कको यात्रामा पूर्णविराम ! – Everest Dainik – News from Nepal
२० बर्षपछि क्रोएसियाको भाग्य चम्क्यो, डेनमार्कको यात्रामा पूर्णविराम !
मस्को । रुसमा जारी विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आइतबार भएका दुवै खेल रोमाञ्चक भए । यस अर्थमा रमाइला भएकी दुवै खेल ट्राइबेकरमा गएर टुंगिए । जारी प्रतियोगितामा पहिलो पटक हिजो खेल ट्राइबेकरमा गए । पहिलो खेलमा रुसले स्पेनलाई हरायो, भने दोस्रो खेलमा ट्राइबेकरमा क्रोयसियाले डेनमार्कलाई ।
टाइब्रेकरमा क्रोयसियाले डेनमार्कलाई ३-२ ले हराएको हो । यो जितसँगै क्रोयसिया क्वाटरफाइनलमा पुगेको छ । निर्धारित समयमा १-१ को बराबरी भएपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकेलियो तर दुवै टोलिबाट गोल हुन सकेन । त्यसपछि खेलको निर्णय टाइब्रेकरबाट लिइएको हो ।
डेनमार्कका लागि क्रिस्टियन एरिक्सन, लेसेस स्कोन र निकोलाई जोर्जेन्सन्ले गोल नगर्दा डेनमार्क घर फर्किन बाध्य भयो । उसका लागि सिमन केजयर, माइकल क्रोन डेलीले गोल गरे ।क्रोयसिया मिलन बडेज र जोसिव पिभारिक चुके पनि आन्द्रे कमरिच, लुका मोड्रिक र इभान रयाकिटिकले गोल गर्दै रुससँगको भेट पक्का गरेका हुन् ।
त्यस अघि खेलको अन्तिम समयमा पाएको पेनाल्टीमा लुका मोड्रिक चुकेका थिए । क्रोयासियाविरुद्ध डेनमार्कले माथिस जोरजेन्सेनको गोलमा पहिलो मिनेटमै अग्रता लिएको थियो । तर चौथो मिनेटमै मारियो मान्डुरिकले गोल गर्दै बराबरी गरे । डेनमार्क २० वर्षपछि क्वाटरफाइनलमा पुग्न सफल भएको हो ।
क्रोएसिया समूह डी को विजेता तथा डेनमार्क समूह सी को उपविजेताको रुपमा अन्तिम १६ मा आएको थियो । क्रोएसियाले पहिलो खेलमा नाइजेरियालाई २-०, दोस्रो खेलमा अर्जेन्टिनलाई ३-० ले र तेस्रो खेलमा आइसल्याण्डमाथि २-१ को जित निकालेको थियो । यसअघि उरुग्वे र फ्रान्स पनि अन्तिम ८ मा पुगेका छन् । आइतबार राति स्पेनलाई पराजित गर्दै क्वाटरफाइनलमा पुगेको आयोजक रुससँग अब क्रोयसियाको भेट हुनेछ । -एजेन्सी
ट्याग्स: denmark, Fifa world cup 2018, क्रोएसिया